Sharing For All: God keeps you going
တစ်ခါတုန်းက အရမ်းတော်တဲ့ တင်းနစ်ကစားသမားတစ်ဦးရှိတယ် ။ ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ အနိုင်ရပြီး သူဟာ ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံးတင်းနစ်ကစားသမားလည်းဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် ကံအကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ပဲ သူနေမကောင်းဖြစ်တာကိုကြုံခဲ့ရတယ် ။ အဲဒီအခါ သွေးအားနည်းပြီး သွေးသွင်းဖို့လိုတဲ့အတွက် သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကနေ သွေးလက်ခံခဲ့တယ်။ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ကံကြမ္မာပါပဲ ။ သူလက်ခံခဲ့တဲ့ သွေးဟာ HIV ပိုးရှိနေခဲ့တဲ့အတွက် သူ့မှာပါ အဲဒီရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ AIDS ရောဂါဆိုးကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး သူ့ဘ၀ရဲ့နေ၀င်ချိန်ကို ရောက်လာခဲ့ရပါတယ် ။
တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ကို ချစ်ကြတဲ့ များစွာသော ပရိတ်သတ်တွေထဲကနေ စာတွေပို့တဲ့အထဲက စာတစ်စောင်ကို သူဖတ်လိုက်တယ် ။
“ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားကိုမှ ရွေးပြီးဘာကြောင့် ဒီရောဂါ ဆိုးကြီးဖြစ်စေရတာလဲ ” လို့ရေးထားတာကိုတွေ့လိုက်တယ် ။ ဒီတော့ သူက အဲဒီလူကို ပြန်စာပို့လိုက်တယ် ။ စာထဲမှာ သူရေးထားတာကတော့
“ ကမ္ဘာမြေကြီးမှာ သန်းပေါင်းငါးဆယ်သော ကလေးတွေဟာ တင်းနစ်စကစားနေကြပြီ၊ ငါးသန်းလောက်သော လူတွေက တင်းနစ်ကစားဖို့သင်ယူနေကြတယ် သန်းတစ်ဝက်လောက်ကတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်သင်ယူကြတယ် အဲဒီမှာမှ တကယ့်တန်းဝင်ကစားဖြစ်တာက လူပေါင်းငါးသောင်းလောက်ပဲရှိတယ် ။ ငါးထောင်လောက်ကတော့ ပြိုင်ပွဲတွေဆီရောက်ပြီး ငါးဆယ်လောက်ကတော့ လက်ရွေးစင်တွေဖြစ်သွားကြတယ် ။ ၄ ယောက်လောက်သာ ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်နိုင်ပြီး နောက်ဆုံး ၂ သာ ဖိုင်နယ်မှာတွေ့ကြတယ် ။ အဲဒီမှာမှ ကျွန်တော်ဟာ ဆုဖလားကိုင်မြှောက်ခွင့်ရတဲ့တစ်ဦးတည်းသောလူဖြစ်ခဲ့တယ် ။ အဲဒီတုန်းကတော့ ကျွန်တော်က ဘုရားသခင်ကို “ ဘာကြောင့်လဲ ” ဆိုတဲ့မေးခွန်းမမေးခဲ့ဘူး ။
အခု လည်း ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို “ ဘာကြောင့်လဲ ” ဆိုတဲ့မေးခွန်း ဘုရားသခင်ကို မမေးသင့်ဘူးမဟုတ်လား ”
ပျော်ရွှင်မှုဟာ သင့်ကိုချိုမြိန်အောင်ပြုလုပ်ပေးတယ် ။ လေ့ကျင့်မှုတွေက သန်မာအောင်လုပ်ပေးပြီး ၀မ်းနည်းမှုတွေက သင့်ကို လူသားဆန်စေတယ် ။ ရှုံးနိမ့်မှုတွေက သင့်ကိုထောင်လွှားမှုမရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးသလို အောင်မြင်မှုဆိုတာကလည်းသင့်ကို ပီတိကိုဖြစ်စေတယ် ။ ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်ကတော့ သင့်ကို “ သွားမြဲ သွားစေလျှက် - လျှောက်မြဲလျှောက်စေလျှက် ” ပါပဲ ။
အမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ကံကြမ္မာကိုလက်ခံပြီးပြီဆိုရင် အနိမ့်ဆုံးကိုရောက်ပြီး ဆိုးရွားတဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုလည်းလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်မဟုတ်ပါလား ။
God keeps you going အား ဘာသာပြန်ခံစားသည် ။
Arthur Ashe, the well known legend player of tennis was dying of AIDS. He got this disease in 1983 by infected blood transfusion during heart surgery. He received numerous letters from his fans all over the World.One of his fans wrote him in gloomy words “why god selected you for suchabad disease”? Arthur Ashe, replied his fan and wrote him in following words,“All over the world5crore children start playing tennis,Out of them 50 lacs learn to play tennis,Out of them5lac learn professional tennis,Out of them 50,000 come to the circuit,Out of them 5000 reach the grand slam,Out of them 50 reach Wimbledon,Out of them4reach to semifinal2 of them reach to the final match,When I was holdingacupI never asked my GOD" Why Me"?And today in pain, I should not be asking Him "Why me?Happiness keeps you SweetTrials keep you StrongSorrow keeps you humanFailure keeps you humbleSuccess keeps you glowingBut only GOD keeps you going and going>>>>>>
Arthur Ashe (49-years-old): July 10, 1943 – February 6, 1993Arthur Ashe won three Grand Slam titles, includingashock win over Jimmy Connors at Wimbledon in 1975, five years after his last win. He died of AIDS-related pneumonia in 1993 after contracting the disease viaablood transfusion.
Posted by Coralchitthu at 4:06 PM
Labels: စိတ်ဓာတ်ခွန်အား စကားစုများ